Ry Bilaogin’izao Tontolo izao, Mitambàra! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Oktobra 2018 11:55 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Aogositra 2005)
Vao haingana izay, nanome ity fanamarihana ity i Boris Anthony, namantsika akaiky sady mpamorona endrin-javatra/fitaovana malalan'ny Global Voices: ”….Tao anatin'izay enim-bolana lasa izay, tsy niasa taminà ‘weblog’ tokana mihitsy aho: karazanà fampitambarana isankarazany foana.”
Tahaka ilay fiteny hoe ”weblog”, milaza zavatra samy hafa ho an'ny olona samy hafa ny teny hoe ”mpanambatra”. Nandritra izay roa taona lasa izay, mpankafy bilaogy maro no nampiasa rindrambaiko mpanambatra fampiasa amin'ny solosaina, toy ny NetNewsWire na ny NewsGator, mba hanarahana bilaogy maro. Nampiditra mpanambatra iray ireo dika faran'ny tamin'ny fitety Firefox, amin'ny fampiasàna haingo iray ho an'ny Firefox antsoina hoe “Tsoraka fanamarihantakila miaina”.
Toy ireo mpanambatra fampiasa amin'ny solosaina, teraka ihany koa ireo mpanambatra bilaogy maro mifototra ao anaty Aterineto, isan'izany ny Bloglines sy ny NewsILike . (Feno dia feno ny pejy wikipedia mirakitra ireo mpanambatra fampiasa amin'ny solosaina sy fampiasa anaty Aterineto, ary mitanisa safidy am-polony maro.)
Natao ireo mpanambatra ireo.mba hahafahan'ny mpanaraka iray manaraka mora foana ireo weblog maro nanapahany hevitra fa ho arahany. Tanjona hafa ny an'ireo andiana mpanambatra vaovao resahan'i Boris – tranonkala Web tokana izy ireo, izay mamintina ho azy blaogy amam-polony na aman-jatony maro, voasokajy isaky ny lohahevitra, isaky ny fahalianana na ny faritra, ho ana mpamaky midadasika kokoa, fa tsy ho an'ilay olona mitantana ilay mpanambatra irery ihany.
Ato amin'ny Global Voices, liana manokana amin'ireo mpanambatra izay manome fijery momba ny firenena na faritra iray izahay, toy ny Arablog-n'ny namanay Haitham Sabbah, izay ”mamerina miblaogy” amin'ny fomba voafantina ireo vontoaty manerana ny Afovoany Atsinanana. Nanomboka toy ny mpanambatra blaogy Jordaniana dimy ary ankehitriny mandrakotra blaogera lalin-tsaina miisa 39 avy ao amin'ny Fanjakana Hashemite ny Jordan Planet-n'i Isam Bayazidi – izay vao nankalaza ny fitsingeranan-taonany voalohany. Ary atolotr'ireo Toniziana namanay manana mpanambatra manan-karena, mampiasa fiteny telo – Frantsay, Anglisy sy Arabo – ireo blaogy mihoatra ny enimpolo ao Tonizia sy avy amin'ny Toniziana mipetraka any am-pitan-dranomasina.
Tsy ireo namanay ao amin'ny Afovoany Atsinanana irery ihany no hany manaraka izany fironan'ny mpanambatra izany. Manerana an'i Atlantika, efa nanomboka mpanambatra blaogim-paritra, MTYBlogs, ireo blaogera ao Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. Ary ho fanampin'ilay mpanambatra BlogAfrica , nivory mba hanolorana ny Nigerian Blog Aggregator ireo Nizeriana, izay ahitana famoahana 600 avy aminà loharano miisa 64. Ndeha isika hanantena fa hiditra an-tsehatra tsy ho ela ny tontolo manankarenan'ny blaogy Kenyana…
Raha mahafantatra mpanambatra blaogy nasionaly na rezjionaly hafa ianareo, ampahafantaro anay amin'ny fanoratana fanehoankevitra eto amin'ity lahatsoratra ity izany. Ary, tsy mila ho lazaina fa raha toa ka mitady blaogy vaovao hampifandraisina amin'ny Andro Iraisam-pirenena Ho an'ny Blaogy ianao, toerana tsara hanombohana ireo mpanambatra ireo.